voalaza fa entina any amin’ny Fitsarana ireo ody gasy tra-tehaky ny mpitandro filaminana eny amin’ireo mpanao ratsy. Araka ny famotoran’ny zandary ireo malaso tratra miaraka amin’ny ody gasy dia “ampiasain’ireo jiolahy ho fiarovana bala ireny ody avy amin’ny mpimasy sy sorona maizina ireny. Nataon’ireo jiolahy ho fiarovan-tena ireny ody ratsy ireny”, hoy ny Komanda Roland Zakatiana, tompon’andraikitry ny fampitam-baovao sy ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, Toby Ratsimandrava. Sesilany ny fahatrarana ody ratsy miaraka amin’ny fitaovam-piadiana tato ho ato.
Basy 10 vita gasy sy ody gasy no tra-tehaky ny miaramila 412 kaompania tao amin’ny fokontany Ambiky, kaominina Berevo, Ranobe. Lehilahy iray avy any Mahajanga nikasa ho any Maintirano no tra-tehaka mialoha ny faran’ny herinandro teo. Taorian'ny fifampitifirana tamin'ireo dahalo am-polony tao Mangabe, kaominina Antanimenabaka Distrika Andilamena, ny talata 29 oktobra, tamin'ny 5 ora sy sasany maraina dia lavo tamin'izany ny dahalo iray antsoina hoe : “Mbaza” na “Shel”. Dahalo miisa 3 hafa ihany koa naratra saingy nentin'ireo namany nandositra. Basy kalachnikov iray izay efa tsy misy bala sy fanafody gasy maro ary masolavitra na “paire de jumelles” izay fampiasan'ireo dahalo ireo no azo tamin'izany. Tsy nisy naratra ny mpitandro ny filaminana.